Global Voices teny Malagasy · Aogositra 2010
Tantara misongadina tamin'ny Aogositra 2010
Tantara tamin'ny Aogositra, 2010
Jordania: Reema, Tsy avelanay ho zava-poana ny fahafatesanao
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Aogositra 2010
Reny 35 taona, manan-janaka 3, no maty novonoin'ny vadiny nandritra ny torimasony tany Jordany . Nihevitra ny vadiny fa "tratry ny mosavy " ny vady andefimandriny ka mety ho izy no hovonoiny voalohany. Tantaran'ny maty feno alahelo no nosoratan'ny zana-drahavaviny ao amin'ny aterineto ary antso maro no nalefa mba tsy ho zava-poana ny fahafatesany .
Afrika Mainty 30 Aogositra 2010
Efa ho herintaona sy tapany izay no namindran'i John Kufuor ny fahefana ho an'i Filoha Atta Mills. Na dia nandao ny birao aza izy, Kufuor dia mbola mahita ny filàna miserasera amin'ny vahoaka. Noho tambajotra ara-tsosialy ao amin'ny aterineto, miresaka amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny kaonty Facebook-ny i Kufuor, izay manana mpanaraka 15.066 (amin'izao fotoana anoratako ity lahatsoratra ity izao).
Sina: fanatsaràna ny GFW
Fahalalahàna miteny 29 Aogositra 2010
Ny tatitra avy amin'ireo loharano samihafa dia niteny fa voasakana any Sina nanomboka tamin'ny Zoma (27 Aogositra) ny Freegate, iray amin'ireo fitaovana malaza fandinganana ny sakana . Rehefa mandefa ilay rindrambaiko ireo mpampiasa izany, dia misy hafatra fampitandremana miseho: Diso, tsy maintsy hajanona ny rindrambaiko. Azafady, raiso ny fialantsininay. Ity...
Amerika Latina 29 Aogositra 2010
Nahatezitra ny mpitia biby tany Medellin, Kolombia ny video iray navoakan'i DJ Yohan Melguizo tao amin'ny valan-tseraseran'ny Facebook roa volana lasa izay .
Azia Atsinanana 28 Aogositra 2010
Japana: Ny hafatra farany napetraky ny mpandrindra Sarimihetsika Japoney Satoshi Kon
nodimandry noho ny homamiadan'ny sarakaty ny mpandrindra Sarimihetsika Japoney Satoshi Kon tamin'ny 24 Aogositra, teo amin'ny faha 46 taonany. Ny hafatra farany napetrak'i Kon izay nivoaka tao amin'ny vohikala ofisialiny dia nanako tamin'ireo mpankafy eran-tany izay malahelo ny fahalasany.
Inde: Fankalazana ny Raksha Bandhan
Azia Atsimo 28 Aogositra 2010
Omaly , ny andron'ny 24 Aogositra , nankalaza ny Raksha Bandhan i Inde - fety izay hankalazana ny fifamatoran'ny zanaky ny ray aman-dreniny. Maneho ireo fihetseham-pony ny mpiserasera mikasika ity fomba nentim-paharazana ity .
Goatemala: Mpampianatra vazimba sy mpanakanto nalaina an-keriny ary novonoina ho faty
Amerika Latina 28 Aogositra 2010
Fiakarana tandrimona herisetra no miseho amin'ireo vondrom-piaraha-monina maro samihafa any ambanivohitr'i Goatemala. Tamin'ity indray mitoraka ity, mpampianatra manana ny maha-izy azy, mpitarika am-panahy, mpandihy ary mpanakanto ao amin'ny Sololá: Lisandro Guarcax.
Naka ain'olona 1600 mahery ny tondra-drano a farany teo tany Pakistan ary nahakasika vahoaka manodidina ny 20 tapitrisa izay tena anatin'ny filàna fanampiana mihitsy amin'izao. Mitety ireo faritra mamakivaky an'i Pakistana ireo tanora Pakistane mponina amin'ny aterineto mizara ireo fanampiana ary maneho ireo hetsika ataony ho hita mivantana amin'ireo bilaoginy, sy ny Twitter, ireo sary sy ireo horonantsary.
Amerika Latina 27 Aogositra 2010
Mpitrandraka 33 tafahitsoka ao amina fitrandrahana varahina sy volamena nirodana any Chili avaratra no nanamafy tamin'ny alalan'ny hafatra fa velona avokoa izy rehetra ao amin'ny fialofana, sady mihamafy ireo fikarohana sy ezaka fanavotana raha saika very ny fanantenana ny hahita azy ireo velona. Ilay hafatra dia tafiakatra taty ivelany tao anaty harona nifatotra tamin'ny iray tamin'ireo fandavahana izay nampiasaina hahafantarana izay tena misy azy ireo, 700 metatra ambany tany.